AKW BOKWỌ BOKO HARAM
2002-2004: Akụkọ mmalite nke ndị Taliban nke Nigeria na Yobe mere.
2003-2004: Nsogbu ndị dị na Kanamma na Gwoza bụ Boko Haram.
2009 (Julaị 26-29): Boko Haram nupụrụ isi; onye nchoputa ya bu Muhammad Yusuf ka egburu.
2010 (Septemba 7): Mgbapu ụlọ mkpọrọ, ntọala nke ndị Boko Haram na-ebuso agha agha, na ịrị elu nke Shekau mere.
2011 (June 16): Mwakpo igbu onwe onye nke ndị uwe ojii GHQ na Abuja mere.
2011 (August 26): Ogbunigwe igbu onwe onye nke isi ụlọ ọrụ UN na Abuja mere.
2012 (Disemba 25): Boko Haram wakporo ụlọ ụka, gbuo ihe dị ka iri abụọ na asaa na Maiduguri na Potiskum.
2013 (Septemba): Otu agha ndị agha Naijiria megidere Boko Haram malitere.
2014 (Febụwarị 14): Egburu ndị obodo nta Christian 121 na Borno steeti, na-ebido mbibi ndị Boko Haram buru ibu.
2014 (Eprel 15): Ihe dị ka ụmụ agbogho 276 tọọrọ na Chibok.
2014 (June 2): Egburu Ndị Kraịst 200 na Gwoza na gburugburu.
2014 (November 28): Ma ọ dịkarịa ala, ndị 120 gburu site na bọmbụ igbu onwe na egbe na nnukwu ụlọ alakụba Kano.
2015 (Jenụwarị 3-7): Ogbugbu nke Baga mere; ihe dịka mmadụ 2000 gburu na nso Ọdọ Mmiri Chad.
2015 (Jenụwarị 31-February 1): Mwakpo ikpeazụ emere na Maiduguri mere; Nke a bụ ebe dị elu maka ọchịchị ndị Boko Haram.
2015 (Machị 8): Boko Haram kwere nkwa ịkwado Alakụba ala ma gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Wilayat Gharb Ifriqiya.
Boko Haram bụ nzukọ Salafi-jihadi, nke ezigbo aha ya rue mgbe otu a swụrụ iyi ịkwado Alakụba Alakụba na Machị 2015, bụ Jami`at Ahl al-Sunna li-l-Da`wa wa-l-Jihad (Nchịkọta nke Ndị mmadụ nke Sunna maka Ije Ozi na Fightlụ ọgụ). A maara ya ugbu a dị ka Wilayat Gharb Ifriqiya (State nke West Africa). Aha Boko Haram pụtara "Amachibidoro Agụmakwụkwọ Ebe Ọdịda Anyanwụ ”wa," aha ndị Naijiria nyere ya, nke jikwa ya mara ya.
Ndi otu a nwere uzo abuo di iche iche: otu n’okpuru ndi ndu nke Muhammad Yusuf (d. 2009), onye guzobere otu a dika ngosiputa megide akwukwo nke di na ugwu Naijiria, na nke abuo n’okpuru Abubakar Shakau (ebe amaghi ya), onye gbanwere ìgwè ahụ ka ha bụrụ nnupu isi nke na-akpọ oku maka steeti Alakụba. Akụkụ nke atọ, nke Boko Haram abanyela na Islamic State (IS), nwere ike ịmalite, ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ị nweta nkwubi okwu ọ bụla.
Boko Haram nwere usoro ụzọ aghụghọ abụọ: otu, nke bụ otu onye ma ọ bụ obere otu, ma lekwasịrị anya n'ụjọ ndị mmadụ n'otu n'otu (ogbugbu mmadụ, ịkwọ ụgbọala site n'ịgba égbè, ụjọ obodo na mwakpo igbu onwe onye megide ebumnuche obodo), na abụọ, nke bụ mwakpo siri ike, na-abụkarị ọgụ. ukwuu mobile tinye n'ọrụ ọgba tum tum ma ọ bụ gwongworo na-awakpo a nyere obere ma ọ bụ comparatively obere-agbachitere lekwasịrị, na mgbe ahụ mgbuchapụ iche bi (ma ọ bụ na ụfọdụ na-adịbeghị anya na-ewere ha n'agha). Na mbido, n’agbata oge 2010-2011 Boko Haram họọrọ ụzọ eji arụ ọrụ nke mbụ, ọbụnadị ugbu a ka na-eji ya. Mana kamgbe mbido afọ 2014 Boko Haram kwadoro usoro mbuso agha a. Ihe mgbaru ọsọ nke usoro nke abụọ bụ ịmepụta ala mpaghara.
Agbanyeghị na ebumnuche ndị Boko Haram lekwasịrị anya nke ukwuu n'ime afọ ise gara aga, enwere ike ịkọwa ihe ụfọdụ. N'ime afọ abụọ mbụ ya (2010-1011), ndị Boko Haram kwadoro ndị obodo ha metụtara nke ọma yana ọnọdụ nkuzi ya. Ndị a gụnyere mwakpo na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na ahụike, mwakpo na mmejọ iwu ọha na eze (site na echiche ndị Alakụba), nke gụnyere ụlọ mmanya, ụlọ ịgba chaa chaa, ahịa ebe a na-ere anụ na-abụghị halal. Karịsịa ndị ọzọ bụ igbu ọchụ nke ndị otu okpukpe Alakụba na-emegide ndị otu ahụ. Otu ìgwè sara mbara nke abụọ mejupụtara bụ "ịbọ ọbọ maka Muhammad Yusuf"; ndị a gụnyere ndị agha nchekwa ma ọ bụ ndị agha. N’oge a Boko Haram na-ekwupụta n’ihu ọha na-ekwusi ike na ha chọrọ ikpe nkwụmọtọ maka ogbugbu Yusuf, n’etiti ihe ndị ọzọ.
N'ime oge 2011-2013 Boko Haram gbanwere ebe ha chọrọ. Ọ bụ ezie na iyi ọha egwu obodo nke ụdị a kọwara n'elu gara n'ihu, otu ahụ mere atụmatụ ike ya n'akụkụ abụọ: Fulani-Hausa obi dị gburugburu Kano na Zaria (north-Central Nigeria), na Middle Belt, ọkachasị obodo mgbachapụ ọkụ nke Jos. Esemokwu na-adịkarị n'etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba nọ na Jos; Kaduna, isi obodo nke ala Middle Belt, ma kachasị na isi obodo etiti nke Abuja. Mwakpo ndị a kachasị dị egwu na okike, ọtụtụ n'ime ha bụ mwakpo igbu onwe ha n'ebe dị iche iche (ụka, ụlọ gọọmentị, ntọala ndị agha) nke doro anya na a họọrọ maka uru ha bara. A na-awakpo ụka na ebe Ndị Kraịst na Sọnde ma ọ bụ na ezumike ndị ọzọ dị mkpa nke Ndị Kraịst, dị ka Krismas na Ista, iji mee ka ndị mmadụ nwụọ na akara ngosi.
N'ime oge bidoro na ngwụcha afọ 2011, ndị agha Naịjirịa nwere ọfụma oge ụfọdụ na Boko Haram, ọkachasị n'oge na-esote afọ 2012 rue oge ọkọchị 2013. Boko Haram gara n'ihu na-arụ ọrụ na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, mana enweghị ike (ma ọ bụ achọghị) imezu. arụmọrụ n'ebe ndị ọzọ na Nigeria. Oge a nke ịnwe njirịta ihe gwụchara na Mee 14, 2013, mgbe onye isi ala Goodluck Jonathan kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede na steeti atọ dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Boko Haram kachasi ike.
Ọrụ ndị Boko Haram duzitere n’oge a nke afọ 2012-2013 yiri ka ọ laghachiri n’ụzọ dị ala teknụzụ. N'oge a, a na-eji obere ngwa agha (mma, mma, na obere egbe) arụ ọrụ n'oge a karịa ngwá agha akpaka na-amasị ugbu a. O doro anya, ọzọ, na mgbanwe ahụ mere na ọtụtụ ndị agha na ngwa ọgụ jupụtara na West Africa na ọdịda nke onye ọchịchị Libya Qadhafi na njedebe nke 2011. Na mbido ndị agha a na ngwa ọgụ ha nyere aka ịrị elu nke al -Qaeda na Maghrib (AQIM), mana mmeri ya n’aka ndị France na Jenụwarị 2013, o doro anya na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị agha na ngwa ọgụ bịara dị na Nigeria (nke Boko Haram) na Central African Republic (na-enyere aka na ịrị elu nke Seleka na Machị 2013). Ọ na-egbu etu esi enwe mmetụta dị egwu na òtù dị iche iche na mpaghara ahụ dum; mgbe mmadu meriri, ndi na-agba oso mmeri a nwere ike ibibi obodo ndi n’adighi ike.
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ 2013, enwere ike ịhụ ọkwa ọhụrụ na atụmatụ Boko Haram. Ngosipụta mbụ nke mgbanwe a bụ ịrị elu na mwakpo buru ibu, na-abụkarị n'obodo nta, na-enwe ọnwụ ọnwụ. Ma ọ dịkarịa ala, mmadụ 2,053 gburu n'oge ọkara mbụ nke 2014 site na mwakpo ndị a. Bido n’otu oge opupu ihe ubi nke 2014, Boko Haram malitere mkpọsa ịtọrọ mmadụ, nke kacha nke ọma n’ihe gbasara ụmụakwụkwọ 279 a tọrọ n’abalị Eprel 14-15, 2014 site n’ụlọ akwụkwọ ebe obibi na Chibok. Agbanyeghị na ụfọdụ ụmụagbọghọ gbachiri gbapụ, o doro anya na vidiyo e were ha (Mee 12, 2014), yana site na nkwupụta nke Shekau na imirikiti n'ime ha ka nọ n'okpuru Boko Haram, ọ ga-abụkwa na o siri dị ka o kwuru , alụọla di na nwunye, ma ọ bụ ree ya n'ịbụ ohu. Nke a abụghịkwa ịtọrọ ụmụnwaanyị na ụmụada bụ ndị Boko Haram kpara; ọtụtụ ndị ọzọ wakporo e lekwasịrị anya na nke a na njedebe site n'oge okpomọkụ nke 2014. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2014, Boko Haram nwere ike nwee opekata mpe ndị agha 10,000 ruo 15,000, na ikekwe ihe ruru ndị nkwado 50,000.
Ngosipụta ọzọ nke usoro caliphate nke Boko Haram bụ mmaliteghachi nke mwakpo igbu onwe, nke gosipụtara na mwakpo ndị nwụrụ na nso nso a. Ndị a eduzila megide ndị nkịtị maka ihe ka ọtụtụ, ndị na-eme ihe ahụ gụnyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị inyom na-awakpo igbu onwe ha. Ebumnuche abụrụla alakụba, ahịa, ọdụ ụgbọ ala, ụlọ akwụkwọ, ogige ndị agha, na ebe obibi. Onu ogugu ndi nwuru anwu site na ogbugbu di iche iche akwuchaghi nke oma.
Agbanyeghị na ndekọ ndị agha Naịjirịa n'afọ 2013-14 bụ nke jọgburu onwe ya, n'oge nke ndị Boko Haram jisiri ike wepụtara onwe ha steeti pụtara oke na steeti atọ nke ugwu ọwụwa anyanwụ nke Nigeria (Borno, Yobe na Adumawa), mgbe mwakpo buru ibu na isi obodo isi obodo Borno, Maiduguri, ghaghachitere na Jenụwarị 2015, Boko Haram malitere ịlaghachi. Ndị agha Naijiria weghachitere ọtụtụ obodo ya ndị dị mkpa site na mmiri 2015, na ọtụtụ ntọala ya dị na Sambisa Forest (n'akụkụ ókèala Cameroon) jupụtara na oge ọkọchị na ọdịda nke 2015. Mana, a ka nwere isi Boko Haram na-eso , na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ndu ya ọ bụla anwụchiri.
Boko Haram bụ ọgbakọ Salafi-jihadi nke nwere usoro okpukperechi na ntụgharị Wahhabi nke Islam. Aha ya bu nke ndi ozo putara otu ahu, ndi choputara ihe di iche na ya na ndi Salafi di iche iche. Ndị Boko Haram na-emegide ụdị agụmakwụkwọ ụwa ọ bụla. N'ezie, akwụkwọ Muhammad Yusuf, Hadhihi `` aqidatuna wa-minhaj da`watina (Nke a bụ okwukwe anyị na usoro nke mkpọsa) (c. 2007), nwere ngalaba gbara ọkpụrụkpụ gbasara agụmakwụkwọ. Mkpesa Yusuf megide agụmakwụkwọ sitere na ebubo ọtụtụ nkuzi, dị ka heliocentric system, the evolution of evolution, na usoro mmụta ntọala ndị ọzọ abụghị ndị Alakụba. Ọ na-ekwu, na-agụpụta ihe ndị na-adịghị mma:
1. Mixgwakọta nwoke na nwanyị nke amachibidoro n'okpukpe Alakụba anyị, na mmachibido iwu ya maara nke ọma dị ka mkpa.
2. Nwanyị na-achọ onwe ya mma, n'agbanyeghị ihe Chineke kwuru: 'Nọrọnụ n'ụlọ ụnụ, unu etekwala ọmarịcha ọrụ unu dịka ndị ọgọ mmụọ mgbe ochie mere.' (Ajụjụ 33:33)
3. Mmega ahụ nke na-adọpụ uche n'okpukpe, dịka bọọlụ (bọọlụ), bọọlụ aka na asọmpi Olimpik.
4. Ka nwanyi pua njem nani ya, nenweghi onye nche (nwoke) ma obu di, n’agbanyeghi na amuma amuru ya, si: ‘Enyeghi ya ikike dika nwanyi kwere na Chineke na ubochi ikpe azu. ehihie ma ọ bụ n'abalị na-enweghị onye nlekọta (nwoke) ma ọ bụ di ya. '
5. gbasa nke ịkwa iko, na omume rụrụ arụ, dị ka mmekọahụ a machibidoro iwu (zina), nwanyị nwere mmasị nwanyị, na nwoke idina nwoke ”Hadhihi `aqidatuna c. 2007: 92-93).
E nwere ngalaba n'ime akwụkwọ ahụ nke na-akọwa mmegide ndị Alakụba megide ọchịchị onye kwuo uche ya, nke a kọwara dịka okpukpere chi (dịka njirimara nke Abu Musa`b al-Zarqawi, onye ekwuru aha ya), yana akụkụ ndị ewepụtara maka ịkatọ Shi`ism na Sufism, yana mkpakọrịta nke gọọmentị na-eduga na polytheism.
Echiche Yusuf dị oke oke n'akụkụ echiche nke ugwu Muslim Salafi, ma mara na ọtụtụ ndị ọkammụta kpụgara ya n'ọrụ, ọtụtụ n'ime ha gburu n'oge mmalite nke ọrụ Boko Haram.
Oge echichi Shekau abughi nke ọgụgụ isi. Echiche Shekau bụ nke onye agha Salafi-jihadi, bụ onye na-emegiderịta ya na Yusuf anaghị ekwukarị Koran ozugbo, mana ọ na-ekwukarị echiche Salafi. Ezigbo ihe atụ nke nkwupụta vidiyo ya sitere na vidiyo nke May 10, 2014:
“Nke a bụ agha megide Ndị Kraịst na ọchịchị onye kwuo uche ya na iwu ha; anyị ebidobeghị, anyị ga-anọ n'Abuja, na steeti niile dị na Naịjirịa.
Agha a megide Ndị Kraịst, m na-ekwu Ndị Kraịst, n'ozuzu ha ndị na-ekweghị ekwe. Allah na-ekwu na anyị kwesịrị imecha ha mgbe anyị nwetara ohere… Ana m arụ ọrụ maka Allah na m ga-anwụ maka ya. Ọ dịghị onye pụrụ ịkwụsị m. I gburu Mohammed Yusuf. Naghị ekwu na ọ ka Shekau karịa? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị gbuo m, ndị agha ndị ọzọ ga-ebili ka m mma; Adịghị m ihe ọ bụla na abaghị uru n'ihu Allah, onye m na-arụ ọrụ maka ya. Na-anọnyere ndị Kraịst ma na-ekwu na anyị bụ otu, na-ekwu na enweghị ọdịiche. Anyị abụghị otu na ndị na-ekweghị ekwe. Anyị bụ ndị enyi [ndị Alakụba nke] Afghanistan, Mali, Yemen na Pakistan, anyị ga-ekpochapụ Ndị Kraịst. Ndị Kraịst ọ bụ ndị anyị kwesịrị igwu egwu? Ọ bụ ma ị nọnyeere anyị ma ọ bụ na ị nọnyeere ha, mgbe anyị hụrụ gị, anyị ga-eji mma wechaa olu gị ”(Cook 2014).
Styledị Shekau abụghị ihe dị mfe, na agbanyeghị na ọ nwere ike iwepụta okwu na-atọ ụtọ ma ọ bụ nke na-atọ ọchị maka ndị na-abụghị ndị Alakụba na-ege ya ntị, enweghị ihe akaebe na nkwupụta ya bụ ihe dị irè n'inweta nkwado site na ndị na-ege ya ntị Muslim.
Onye guzobere Boko Haram, Muhammad Yusuf, bụ onye nwere obi ụtọ, o yikwara ka ọ dọtara ọtụtụ ndị mmadụ na ugwu ọwụwa anyanwụ nke Nigeria site n'ike nke àgwà ya. O doro anya na ọ nwetara njikwa ọrụ zuru oke na otu ga-abụ Boko Haram, agbanyeghị, ma eleghị anya enwere ọtụtụ obere mkpụrụ ndụ dị iche iche na mpaghara ugwu Nigeria.
Boko Haram n'okpuru ndu Yusuf, na oge 2010-2012 bụ ndị isi zuru oke karịa ka ọ ga-abụ n'oge 2013-2015. Ndị isi abụọ, Manman Nur na Khalid al-Barnawi, bụ ndị ama ama, ma ọ dịkarịa ala Nur bụ Cameroon. Ha abụọ yiri ka atụmatụ Shekau enweghị nsogbu n'oge 2012-13, ọ ga-abụrịrị na ọ bụ ikike kpatara ntọala Ansaru. Otu nke ikpeazụ a nwere ọtụtụ ebumnuche dịka ndị Boko Haram, mana ha kpachara anya iduzi ime ihe ike ha megide ndị na-abụghị ndị Alakụba. Ansa na yebesusuw Ansaru no ho no, ma yensusuw sɛnea 2014-2015 te no ho nhwɛ. (Zenn 2014)
Abubakar Shekau lekwasịrị anya na Boko Haram gbasara onye ọ nọ, ma n’oge ọ nọ n’elu, dịka 2011-2015, ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihu ọha nke ìgwè ahụ. Ọtụtụ oge ndị agha Naịjirịa kwuru na ọ nwụọ, ma ọ bụ na onye karịrị ihe nkiri iri anọ ewepụtara n'oge a bụ onye na-eme mpụ. N'agbanyeghị eziokwu nke ebubo ndị a, onye a maara dị ka Shekau pụtara mgbe niile na agha ndị agha, na-ekwu okwu n'ụzọ iwe, na-ewe iwe, ma na-ewepụghị ọkwa dị elu nke Islam. Ọdịnaya nke vidio ndị a adịchaghị ọkaibe, na ederede karịa nke mkpọtụ kama nkwupụta echepụtara nke ọma.
Kemgbe Mee 2015, Shekau apụọla kpam kpam na vidio Boko Haram, na-ebute asịrị na enwere ike wepụrụ ya ma ọ bụ pụọ na ngalaba ọzọ nke Alakụba Alakụba. N'oge a, Nọvemba 2015, ọ dị ka enweghị onye nọchiri Shekau. Ikekwe Alakụba Alakụba ahọrọla onyonyo enweghị ntụnyere iji gbochie ụdị ofufe mmadụ Shekau zụlitere.
Boko Haram na-enwe nsogbu dị iche iche: ọ bụ nzukọ Salafi-jihadi bụ nke gbasoro ntọala otu Alakụba na Naịjirịa niile. Agbanyeghị, n'ihi enweghị arịrịọ n'etiti ọtụtụ ndị Hausa-Fulani ndị Alakụba bi na mgbago ugwu Naịjirịa (ịghara ikwu maka enweghị ike inweta nkwado n'etiti ndị Alakụba nọ na ndịda), Boko Haram tụgharịrị nke ọma na mpaghara Kanuri. Eziokwu a mepụtara oke nke Boko Haram enweghị ike ịbanye: ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na isi obodo ugwu na Middle-Belt, ọ gosipụtaghị ikike ọ bụla iji wepụta ọnụọgụ na-esote n'agbụrụ ya.
Eziokwu Boko Haram ji eme ihe ike, na enweghị ike igosipụta njikọ dị n'etiti ime ihe ike (dịka ọmụmaatụ, mwakpo igbu onwe onye ma ọ bụ mgbuchapụ oke) na ebumnuche ekwuputara iguzobe ala Alakụba. Ọtụtụ n'ime ndị e mere ihe ike ya bụ n'ezie ndị Alakụba, ọ bụ ezie na Boko Haram gosipụtara mwakpo ha na-ebuso ndị Kraịst ma ọ bụ ndị gọọmentị ebumnuche, nke bụ eziokwu bụ na ọ na-elekarị ndị alakụba na ndị isi okpukpe Alakụba anya. Mmegide n'elu Muslim zaa na-agbanwe agbanwe na ozizi nke takfir, ma ha ekwekọghị na oke Islam dị na mpaghara ugwu Nigeria, ọbụnadị na Salafism. Boko Haram egosighi ikike iji dọta ndị ọkammụta ndị Alakụba kpọrọ ihe.
Maka ebumnuche ndị dị n'elu, arụmọrụ nke 2014 dị oke mkpa. Boko Haram enweghị ike ịgafe mpaghara Kanuri nke dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ya mere, a manyere ya ịwakpo mpaghara Kanuri na mba ndị agbata obi ya bụ Cameroon, Chad na Niger. Mwakpo ndị a rụpụtara ihe ngwa ngwa dọtara gọọmentị na ndị agha nke mba ndị a ibuso Boko Haram agha. Karịsịa ndị agha nke Chad na Niger gosipụtara na ha dị oke egwu na ịlụso Boko Haram ọgụ, na ihe ịga nke ọma nke ndị agha a nwere ike ime ka gọọmentị Naịjirịa mebie agha Boko Haram nke ọma.
Site na njikọ nke Boko Haram na Islamic State, enwere ọtụtụ ihe ịma aka maka mpaghara ọhụrụ ahụ. Otu bụ iji lanarị mwakpo nke ndị agha Nigeria, Cameroon, Chadian na Niger, nke ndị agha US na France na-akwado. Ruo ugbu a, Boko Haram rụzuru ọrụ a. Echere na usoro kachasị mma ya bụ ichere njikọta ahụ, ruo mgbe ohere ọhụụ pụtara. Nke abụọ bụ ịchọta onye ndu ọhụrụ ga-anọchi nke Shekau, onye nọ ya na-egbochi ọganiihu ọ bụla ndị Boko Haram ga na mpaghara mpaghara ugwu Naịjirịa. Dị ka ọ dị ka apụrụ n'akụkụ kemgbe oge okpomọkụ 2015, ọ ga-abụrịrị na nke a na-eme n'oge ugbu a. Nke atọ bụ ịmepụta usoro aghụghọ na arụmọrụ ga-agbanwe agbanwe na Salafi-jihadism, mana ọ ga-egosipụta nkewa n'etiti gọọmentị Naịjirịa na ndị ugwu Alakụba bi na ugwu. N’ụzọ ezi uche dị na ya, usoro na arụmọrụ dị otu a ga-elekwasị anya na ime ihe ike n’ebe ndị Kraịst nọ karịa n’ebe ndị Alakụba nọ. Mgbanwe a amalitebeghị. Nke anọ, Boko Haram ga-azụlite usoro jikọrọ ọnụ yana mmemme mgbasa ozi nke nwere ike ime ka obi sie gị ike na ndị ndu ya ma gwa ndị Alakụba ozi ya. Nke a emebeghịkwa.
Olileanya ndị Boko Haram nwere na obere oge adịghị mma. Agbanyeghị, ọ ga-ekwe omume na gọọmentị Naịjirịa ga-eme mkpọmkpọ ebe ọ na-aga nke ọma n'ichekwa otu a. Ọ ka ga-ahụkwa, ruo ókè oke nkwado nke Ala Ala Ala ga-emetụta otu ahụ n'echiche na atụmatụ.
Esi nri, David. 2014. "Boko Haram: A ọhụrụ Alakụba State na Nigeria." Nweta site na http://bakerinstitute.org/research/boko-haram-new-islamic-state-nigeria/ na 15 November 2015.
Yusuf, Muhammad. c. ihe 2007. Hadhihi `` aqidatuna wa-minhaj da`watina. Maiduguri. Daalụ Alex Thurston maka inye m otu akwụkwọ ọrụ a.
Zenn, Jekọb. 2014. "Boko Haram: Recnye ndị ọzọ n'ọrụ, inye ego, na ịzụ ahịa ngwa agha na mpaghara Lake Chad." Ogige maka ịlụ ọgụ nke iyi ọha egwu na West Point. Nweta site na https://www.ctc.usma.edu/posts/boko-haram-recruitment-financing-and-arms-trafficking-in-the-lake-chad-region na 15 November 2015.